> Resource> Utility> otú iji tọgharịa Windows Vista Paswọdu enweghị Loading na
Mkpa iji tọgharịa Vista paswọọdụ iji nweta kọmputa m!
Olee otú m tọgharịa paswọọdụ na a laptọọpụ na-agba ọsọ Windows Vista Home adịchaghị?
M na-adịghị passcode otú apụghị nbanye ihe ọ bụla.
Daalụ maka enyemaka gị !!
Computer na-eme ka ndụ anyị na-arụ ọrụ nnọọ adaba. Nke ahụ bụ n'ezie. Iji chebe onwe onye ọmụma, kọmputa ọrụ na-ewekarị setịpụrụ okwuntughe n'ihi na ha kọmputa ma ọ bụ iche iche iche iche nke faịlụ. Ma ugbu a, ebe a bụ nsogbu. Gịnị ka i kwesịrị ime mgbe ị na-echefu paswọọdụ? Ma ọ bụ otú iji tọgharịa paswọọdụ gị na Windows enweghị n'idebata na? N'ezie, e esesịn e a ụzọ. Ị nwere ike reinstall gị Windows ihichapu na tọgharịa ọhụrụ paswọọdụ gị Windows Vista. Ma ị na-aga atọpụ ihe niile echekwara na kọmputa gị. Ya mere, tụọ ya. Ọ bụrụ na e bụghị ihe ọ bụla ị na-eche banyere ya, dị nnọọ ime ya.
Ma, ọ bụrụ na e, i kwesịrị ịhọrọ ụzọ ọzọ na-adịghị ihe wutere gị data na kọmputa. Ihe ị chọrọ ime bụ nanị nzọụkwụ abụọ. Mbụ, ga-esi n'ime kọmputa, na mgbe ahụ tọgharịa paswọọdụ ke Windows Vista. Ọ bụ ya.
Nzọụkwụ nke otú iji tọgharịa paswọọdụ ke Windows Vista
Tupu nzọụkwụ, na-a bootable omume nke-enye gị ohere iji nweta kọmputa, nakwa dị ka ime nrụpụta nke Windows Vista paswọọdụ. Ka na-achọ onye? Wondershare LiveBoot bootable CD / USB, a usoro disk pụrụ inyere gị aka ịnweta na kọmputa na tọgharịa paswọọdụ. Ọ bụghị nanị na Windows Vista, a usoro na-arụ ọrụ nke ọma na Windows 7 na XP.
Mgbe ahụ, ka ego na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nke Windows Vista paswọọdụ nrụpụta n'okpuru:
Step1. Nweta gị na kọmputa na LiveBoot
Mgbe na nbudata na wụnye LiveBoot na kọmputa gị, ọkụ ya n'ime a CD ma ọ bụ USB mbanye. Mgbe ahụ, fanye ya n'ime na kọmputa na-amalite ya. Mgbe usoro amalite, pịa F12 ga-esi n'ime buut Ngwaọrụ NchNhr, họrọ USB CD-ROM Drive na pịa Tinye. Mgbe ị na-ebe a na buut NchNhr dị ka n'okpuru. Họrọ onye mbụ iji nweta gị na kọmputa.
Step2. Tọgharịa Windows Vista paswọọdụ
Mgbe ịnweta gị na kọmputa, yo'll chọta usoro bụ nnọọ otu ihe ahụ dị gị onwe gị si. Ọ bụ naanị tupu echichi usoro wuru na Liveboot. Mgbe ahụ LiveBoot omume ga-agba ọsọ na-akpaghị aka. Pịa na "Paswọdu & Key Finder" nhọrọ-esi banye "Admin Paswọdu Resetter".
Ebe a gị na mkpa iji pịa na "Admin Paswọdu Resetter" iji tọgharịa Windows Vista paswọọdụ iji oghere.
Mgbe ahụ ị pụrụ wepụ bootable CD ma ọ bụ USB mbanye, na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa. Ị ga-ahụ na kọmputa agaghị ajụ maka ohere paswọọdụ ọzọ. Na ị nwere ike ịtọ ọzọ paswọọdụ maka kọmputa gị loading na, ma setịpụụrụ na i nwere ike icheta. :)
Ọzọkwa, a LiveBoot CD nwekwara ike aka chọta azụ koodu igodo nke Windows ma ọ bụ usoro Office prodcuts, nke na-ewetara gị na nnukwu mma mgbe ị chọrọ reinstall usoro ma amaghị igodo.
Olee otú Idozi BootMGR efu / abịakọrọ Nsogbu na Windows 7 ma ọ bụ Vista
Olee otú Idozi Sistem Loading Error